Siyihlalutya iFIFA 18, isenguKumkani webhola ekhatywayo yedijithali | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | | ngokubanzi, Ikhaya, Izaziso, Videogames
Qho ngonyaka sizibuza umbuzo ofanayo ... Ngaba i-PES iya kuthi ekugqibeleni ibambe iFIFA? Kwaye inyani kukuba emva kokuvavanya yomibini imidlalo yevidiyo sinokuthi ngeli xesha i-PES 2018 isondele ngakumbi kunangaphambili kwiFIFA 18. Nangona kunjalo, namhlanje siza kuhlalutya umdlalo wevidiyo webhola ekhatywayo othengiswa kakhulu omiselwe ukuqhubeka ulawula kulo nyaka, iFIFA 18.
Umdlalo weqonga kunye nomgangatho wemizobo awubonakali uphucukile ngokugqithileyo, Nangona kunjalo, zonke ezi ziinkcukacha zokuba abathandi bebhola ekhatywayo esemgangathweni bafuna ukuyicinga kancinci kancinci. IFIFA 18 ingaqhubeka nokusinika iiyure kunye neeyure zokuzonwabisa.
Olu fakelo luguquke kancinane, kodwa ukubona la manyathelo kunye nokuqonda ukuba asijonganga neFIFA 17.0 elula yenza ukuba bonke abasebenzisi balolu hlobo lomdlalo wevidiyo bonwabe, kuba le yindlela yethu yokuba nexesha elihle, ukudlala ibhola kunye Umceli mngeni kubahlobo bethu abakwi-Intanethi ukuba bangaboni ukuba ngubani onako ukuphumelela, kodwa banakho nokufumana amanqaku amahle kakhulu. Siya apho kunye nohlalutyo lweFIFA 18, ezi ibikukuqala kwethu ukubonakala.
1 Zimbalwa kodwa zanele ukuphucula umdlalo
2 Iqela lokugqibela njengeyona asethi ibalaseleyo yamaxesha onke
3 Imizobo incinci kodwa yanele
Zimbalwa kodwa zanele ukuphucula umdlalo
IFIFA 18 iye yafuna ukubetha apho ibuhlungu kakhulu kubadlali bempazamo. Wayefuna ukusombulula ezinye zeempawu ezenza ukuba amanqaku afumaneke ngokulula. Inyathelo lokuqala ibikukuzikhusela, ngoku kubonakala ngathi inkqubo yokuzikhusela ngokuzenzekelayo (R1) ayisebenzi njengesiqhelo. Uninzi lwethu lungabathandi bokuzikhusela kwiqela lakho, kuba ngelixa i-AI yayihlasela imbangi yethu, sasigxile ekugubungeleni nawuphi na umgca wokupasa onokwenzeka. Ngaphandle kwamathandabuzo, iya kuba ngumcimbi wokuyiqhela, ayikhangeleki ngathi iza kuba nzima kakhulu.
Kodwa ayilulo lodwa utshintsho kwinqanaba lokuzikhusela, abadlali abakule ndawo ngokubanzi babonakala behle ngesantya kakhulu, njengakwibhola ekhatywayo yokwenyani, indawo ebaleni lomdlali okhuselayo ophambili izakubaluleka kunakuqala , yiyo loo nto kufuneka singaphambani ngoxinzelelo. Kwakhona, iFIFA iya kubavuza abo bayibeka ibhasi emva, kude noxinzelelo embindini oya uthandwa ngakumbi kwibhola ekhatywayo yehlabathi.
Indlela ngoku sele yamkele imo yebali epheleleyo, asisavali kwiPremier League, siza kukwazi ukwabelana ngebhentshi noCristiano Ronaldo ngokwakhe. Kodwa lumka, kuba uAlex Hunter akasenguye nawuphi na umntu wasemzini.
Ukucwangciswa kwamabala emidlalo kuye kwafumana i-retouch enkulu, ngoku iibhena zenzelwe umntu ngakumbi kuxhomekeke kwiqela lendawo, uluntu alubonakali ngathi luyikhadibhodi ephindaphindayo, kodwa siyabona ukuba iindawo ezithile zezitendi ziyavuya kwaye ziyazisa. Inyani yile yokuba ngoku ukucaciswa kwemidlalo kuya kubakho ngaphezulu, Ukufuna ukushenxisa imbaleki edumileyo yesitrato eyenza ukuba aba-sprinters babe nexabiso eliphezulu kakhulu kwiQela lokuGqibela. Okuninzi okudlulela emngxunyeni (phezulu okanye ezantsi) kunqabile kakhulu.
Iqela lokugqibela njengeyona asethi ibalaseleyo yamaxesha onke
Ngoku ungasebenzisa iQela leFIFA lokuGqibela leFIFA Ukuqala ukudibanisa iqela lakho, ukuba ungumsebenzisi wohlelo oludlulileyo uza kufumana iimvulophu ezamkelekileyo, umzekelo, sinabadlali abambalwa abadwelisiweyo abasivumele ukuba siqokelele iqela lama-82/100 ngaphambi komiliselo olusemthethweni lomdlalo, nangona Iya kufumaneka ngolwe-Lwesibini kwabo bathenga uhlelo lwe-Icon phakathi kwabanye abasebenzisi abanethamsanqa.
Imizobo incinci kodwa yanele
Uphengululo lweFIFA 18 FUT
I-FIFA 18 iyaqhubeka nokusebenzisa ngokupheleleyo iinjinjini zeFrostbite ezithi zisetyenziswe yi-EA umzekelo kwibala lokulwa 1. Inyani yile yokuba ngoku ingca ithathe inqaku lokwenyani ngakumbi, nangona kubuso be-PES iyaqhubeka nokusebenza ngakumbi. Kwelinye icala, ikhadi lomdlalo lamkela imiqondiso yeeligi, kunye nokuphuculwa okubonakalayo eluntwini, imibhiyozo kunye nokuba ixesha libachaphazela njani abadlali.
Ngamafutshane, nangona iqheleke kakhulu kuthi, IFIFA 18 itshintshe ngokwaneleyo ukuze icacise ukufunyanwa kwayo, nangona sicebisa ukuba i-EA ingaphumli, IKonami iya yomelela nge-PES 2018 esishiyile iimvakalelo ezimnandi. Khumbula ukuba ungadlala kunye nohlobo lwe-Icon ukusuka ngoLwesibini, nge-26 kaSeptemba, kubo bonke abantu abafayo ukusukela nge-29 kaSeptemba.
Ukuphuculwa kwemowudi ye-El Camino
Zimbalwa iinguqu zokudlala
Inkqubo yokwenza umdlalo
Nokuba iyintoni na, iFIFA 18 ibonakala iqhubeka nokuba yinkokheli, ngakumbi kumba weQela eliGqwesileyo leFIFA kunye neeFUT Champions ezikuvumela ukuba uthambise amagxa kunye ne-elite phantse akukho mzamo. Inyani yile yokuba ubuGcisa be-elektroniki bugcina kakuhle intonga yenkokeli yokulinganisa kwibhola ekhatywayo, kwaye iYouTube sele iphezulu kubasebenzisi abachitha ixesha labo neFIFA 18 ... ngaba uza kuba ngomnye wabo? Izakudlala kwaye ibonakalise.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Sihlalutya iFIFA 18, isenguKumkani webhola ekhatywayo yedijithali